Patrik Schick oo isagoo dhaawac kasoo kabanaya sii dhaawacmay! – Gool FM
(Roma) 18 Sebt 2017 – Waxaa lasoo werinayaa in uu markale dhaawacmay qannaaska AS Roma ee Patrik Schick isagoo sidaa darteed ku seegi doona kulanka Benevento, maadaama uu bestii la yahay dhaawac muruqa ah.
Laacibkan caalamiga ah ee dalka Czech ayaa xagaagan kusoo biiray kooxda Giallorossi, balse wuxuu seegay inta badan kulamadii xilli-horaadka iyo xilli-ciyaareedka haatan bilowday oo dhan.
Laacibka ayaa haatan la sheegayaa inuu ka maqnaan doono kulanka Benevento sida uu werinayo hilinka Sky, kaddib markii uu wax ka noqday muruqa misigta xilligii tababarka, isagoo scan maraya maalmaha soo aaddan.
Radja Nainggolan ayaa isna woxooga jug ah qaba, waloow uu ka mid yahay kooxda loo xulay kulanka ay Roma Arbacada la yeelanayso Benevento, misna uma badna inuu bilowgiiba garoonka soo galo.